Yohane 2 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Da a ɛto so abiɛsa no, wohyiaa ayeforo bi wɔ Kana+ a ɛwɔ Galilea, na na Yesu maame+ wɔ hɔ. 2 Wɔtoo nsa frɛɛ Yesu ne n’asuafo nso baa ayeforohyia no ase. 3 Bere a nsã no sae no, Yesu maame+ ka kyerɛɛ no sɛ: “Wonni nsã.” 4 Na Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔbea, dɛn na me ne wo wɔ yɛ?+ Me dɔn nnya nnui.”+ 5 Ne maame ka kyerɛɛ asomfo no sɛ: “Nea ɔbɛka akyerɛ mo biara, monyɛ.”+ 6 Saa bere no, na nsuhina asia a wɔde abo ayɛ sisi hɔ sɛnea Yudafo ahodwira+ ho ahyɛde te no, na na emu biara betumi afa susuhina abien anaa abiɛsa. 7 Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momfa nsu nhyɛ nhina no mama.” Na wɔde nsu hyɛɛ ne nyinaa ma tɛnn. 8 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Afei monsaw bi nkɔma adidiihwɛfo no.” Ɛnna wɔde kɔe. 9 Afei bere a adidiihwɛfo no kaa nsu a adan nsã+ no hwɛe a na onnim baabi a efi na asomfo a wɔsaw nsu no de wonim no, adidiihwɛfo no frɛɛ ayeforokunu no 10 see no sɛ: “Obiara de nsã pa na ebesisi hɔ kan,+ na sɛ nkurɔfo bobow a, afei ɔde nea enye no aba. Wo de, wode nsã pa no asie abesi sesɛɛ.” 11 Yesu yɛɛ eyi wɔ Kana wɔ Galilea sɛ ne nsɛnkyerɛnne no mu nea edi kan, na oyii n’anuonyam+ kyerɛe; na n’asuafo no gyee no dii. 12 Eyi akyi no, ɔne ne maame ne ne nuanom+ ne n’asuafo no siim kɔɔ Kapernaum,+ nanso wɔanni nna bebree wɔ hɔ. 13 Saa bere no na Yudafo twam+ no abɛn, na Yesu kɔɔ Yerusalem.+ 14 Na ohuu wɔn a wɔtɔn anantwi ne nguan ne mmorɔnoma+ ne sikasesafo sɛ wɔtete asɔrefie hɔ. 15 Afei ɔde nhama yɛɛ mpire pam wɔn a wɔde nguan ne anantwi aba hɔ no nyinaa fii asɔrefie hɔ, na ohwiee sikasesafo no sika gui na ɔkaa wɔn apon butubutuwii.+ 16 Na ɔka kyerɛɛ wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma no sɛ: “Momfa eyinom mfi ha nkɔ! Monnyɛ m’Agya fie+ aguadi fie!”+ 17 N’asuafo no kaee sɛ wɔakyerɛw sɛ: “Wo fie ho nnamyɛ bɛmene me.”+ 18 Ɛnna Yudafo no bua see no sɛ: “Eyinom a woreyɛ yi, sɛnkyerɛnne+ bɛn na wowɔ de kyerɛ yɛn?” 19 Yesu bua see wɔn sɛ: “Munnwiriw asɔrefie yi ngu,+ na mede nnansa bɛma so asi hɔ.” 20 Ɛnna Yudafo no kae sɛ: “Asɔrefie a wɔde mfe aduanan asia sii no, wode nnansa bɛma so asi hɔ?” 21 Nanso ɔno de, na ɔreka ne nipadua asɔrefie+ ho asɛm. 22 Enti bere a ɔsɔre fii awufo mu no, n’asuafo no kaee+ sɛ na ɔtaa ka saa; na wogyee Kyerɛwnsɛm no ne nsɛm a Yesu kae no dii. 23 Nanso bere a ɔwɔ Yerusalem twam no ne n’afahyɛ ase no,+ nnipa pii a wohuu nsɛnkyerɛnne a ɔyɛe no+ gyee ne din dii.+ 24 Nanso Yesu de, wamfa ne ho anto wɔn so,+ efisɛ na onim wɔn nyinaa, 25 na afei na enhia no sɛ obiara di onipa ho adanse, efisɛ na ɔno ankasa nim nea ɛwɔ onipa mu.+